ဝက်ခြံကို ဘယ်လိုကုသမလဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးစင်တာ » အရေပြားရောဂါ » ဝက်ခြံ » ဝက်ခြံကို ဘယ်လိုကုသမလဲ
ဝက်ခြံဟာ အလွန်အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာ ပေါက်လေ့ရှိပြီး ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် ဝက်ခြံပေါက်လာပြီဆိုရင် အမြန်ဆုံးပျောက်ချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဝက်ခြံကို ဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက် ကုသရမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံကုသခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ အနာကျက်ဖို့၊ ဝက်ခြံဖု အသစ်ထပ်မထွက်ဖို့၊ အမာရွတ်မထင်ဖို့နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ အတတ်နိုင်ဆုံး လျော့နည်းစေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပျော့စား ဝက်ခြံပြဿနာကို ဘယ်လိုကုသရမလဲ
အပျော့စား ဝက်ခြံပြဿနာဆိုတာ ဆားဝက်ခြံ၊ အမည်းစက်တွေနဲ့ အသေးစား ဝက်ခြံဖုများထွက်ခြင်းကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာဖြစ်လာရင် အရေပြားကို ရေနွေး၊ အပျော့စား သန့်စင်ဆေးတွေနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကိုလိုက်ပြီး ဆေးဆိုင်မှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဆေးတွေ ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေးတွေ အသုံးပြုဖို့ လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဆေးဝါးတွေကို ဝက်ခြံထွက်တဲ့နေရာတဝိုက် လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံကုသရာမှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့
Benzoyl peroxide – ဒီဒြပ်ပေါင်းဟာ P.acnes အမည်ရှိတဲ့ ဝက်ခြံဖြစ်စေတတ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို သေစေနိုင်သလို အရေပြားမှ အဆီထွက်ခြင်းကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်
Resorcinol, salicylic acid, Sulphur – ဒီဒြပ်ပေါင်းတွေကတော့ ဆားဝက်ခြံနဲ့ အမည်းစက်များထွက်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ဝက်ခြံကုသရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ဆေးဝါးများကို လိုးရှင်း၊ ခရင်မ်၊ အဆီ၊ ဂျယ်လ် ပုံစံတွေနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုပြီး အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ထိခိုက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ပူစပ်ပူလောင် စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားရခြင်းတို့ ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေစဉ် သိသာထင်ရှားတဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ ရက်သတ္တပတ်နဲ့ချီပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ဆိုင်းဖို့ လိုကောင်းလိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလယ်အလတ်စား၊ အပြင်းစား ဝက်ခြံပြဿနာကို ဘယ်လိုကုသရမလဲ
ဒီပြဿနာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ ပိုမိုရှုပ်ထွေး အဆင့်မြင့်တဲ့ ကုသမှုတွေ ခံယူရဖို့ရှိပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က တစ်မျိုးထဲ ဒါမှမဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပိုပြီး ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရမယ့် လိမ်းဆေး၊သောက်ဆေးတွေ ညွှန်ပေးလိမ့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေစေပြီး အရောင်ကျစေမယ့် ပဋိဇီဝလိမ်းဆေး၊ ဆားဝက်ခြံနဲ့ အမည်းစက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် retiniods လိမ်းဆေး၊ ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ P.acnes ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို သေစေပြီး အရေပြားအဆီထွက်ခြင်းကို လျော့ကျစေတဲ့ လိမ်းဆေးများကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ခရမ်၊ လိုးရှင်းများ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အစိုဓါတ် ရရှိမှာဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အယ်လ်ကိုဟောအခြေခံတဲ့ ဂျယ်လ်များကို အသုံးပြုဖို့ သင့်ဆရာဝန်က အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒီဂျယ်လ်အမျိုးအစားတွေရဲ့ အသားအရည်ခြောက်သွေ့စေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ကိုတော့ သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံကုသရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ လိမ်းဆေးတွေကြောင့် အချို့လူတွေမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဒဏ် ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အရေပြားလောင်ခြင်း၊ နီရဲခြင်း၊ အကြေးခွံထခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း စတာတွေဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၎င်းဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျ လိုက်နာအသုံးပြုသင့်သလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ဆီ သွားရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဝက်ခြံပြဿနာအတွက် အရေပြားလိမ်းဆေးတွေအပြင် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ထပ်မံပွားများမလာအောင် ထိန်းချုပ်ဖို့ ပဋိဇီဝဆေးဝါးများ သောက်သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လူတွေကတော့ သောက်ဆေးတွေကြောင့် အစာအိမ်မကောင်းခြင်း၊ မူးဝေခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဝက်ခြံဖုကြီးတွေနဲ့ ဝက်ခြံအိတ်တွေကို ဘယ်လိုကုသရမလဲ
အကယ်၍များ ကံမကောင်းစွာနဲ့ ဝက်ခြံဖုကြီးတွေ၊ ဝက်ခြံအိတ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မိမိဘာသာ ကုသတာမျိုး မလုပ်ဘဲ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ မဖြစ်မနေပြသဖို့ လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဘာသာ ကုသခြင်းဟာ ၎င်းအခြေအနေတွေကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ပဋိဇီဝဆေး၊ retinoid တွေနဲ့ မသက်သာဘူးဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်က isotretinoin ခေါ် ဆေးတစ်မျိုး အသုံးပြုဖို့ ညွှန်ပေးလိမ့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ ဝက်ခြံဂလင်းတွေရဲ့ အရွယ်အစားကို လျော့ကျစေပြီး အမာရွတ်ကျန်ခဲ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆေးကြောင့် ကလေးငယ်တွေမှာ မွေးရာပါချို့ယွင်းမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ အသုံးပြုဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ အခြားအခြေအနေတွေမှာလည်း ဒီဆေးအသုံးပြုဖို့ သင့်တော်မတော် အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများတွင် ဟော်မုန်းကြောင့် ဝက်ခြံထွက်ခြင်းကို ဘယ်လိုကုသရမလဲ
ခန္ဓါကိုယ်မှာ ပုံမှန်ထက်ပို၍ အမွှေးအမှင်ထွက်ခြင်း၊ ဓမ္မတာမမှန်ခြင်းတို့ကြောင့် ဝက်ခြံပေါက်နိုင်သလို ဓမ္မတာမလာခင် အချိန်တွေမှာလည်း ဝက်ခြံထွက်လာတတ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပြဿနာအတွက် သန္ဓေတားဆေး၊ စတီးရွိုက်အနည်းငယ်ပါဝင်တဲ့ ဆေးဝါးများ၊ အန်ဒရိုဂျင်ဟော်မုန်းဆန့်ကျင်တဲ့ ဆေးဝါးများ အသုံးပြုရဖို့ ရှိပါတယ်။ ၎င်းဆေးဝါးတွေက အဆီနဲ့ အန်ဒရိုဂျင်ဟော်မုန်း ထွက်ရှိမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
ဝက်ခြံကို ဆေးဝါးအပြင် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာများ အကူအညီနဲ့လည်း ကုသနိုင်ပါတယ်။ လေဆာကုထုံး၊ dermabrasion ခေါ် အပေါ်ယံအရေပြားအလွှာအချို့ကို ဖယ်ရှားပစ်တဲ့ နည်းလမ်းများကို ဝက်ခြံကုသရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဝက်ခြံအမျိုးအစားနဲ့ ပြင်းထန်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ကုသမှုတွေလည်း ကွဲပြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပျော့စားဝက်ခြံပြဿနာကို ဆေးဆိုင်မှာ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေနဲ့ ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပေမယ့် အလယ်အလတ်နဲ့ အပြင်းစား ဝက်ခြံပြဿနာတွေကိုတော့ ပဋိဇီဝဆေးဝါးများ၊ ထိုးဆေးများ၊ ဝက်ခြံဖယ်ရှားပစ်တဲ့ကုထုံးများနဲ့ ကုသဖို့လိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကုသမှုနည်းလမ်းက သင်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မေ 27, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 14, 2019
Questions and Answers about Acne. https://www.niams.nih.gov/health_info/acne/#acne_e. Accessed March 8, 2017.
Acne. https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/acne. Accessed March 8, 2017.
ACNE: DIAGNOSIS AND TREATMENT. https://www.aad.org/public/diseases/acne-and-rosacea/acne#treatment. Accessed March 8, 2017.
What Is Acne? Fast Facts: An Easy-to-Read Series of Publications for the Public. https://www.niams.nih.gov/health_info/acne/acne_ff.asp#d. Accessed March 8, 2017.